Masangano eVashandi veHurumende Anowirirana Kuenda Mberi neKuramwa Mabasa
Masangano anomirira vashandi vehurumende asangana muHarare neChipiri kuti aongorore mafambiro ari kuita kuramwa mabasa kuri kuitwa nenhengo dzawo kusvika pari zvino.
Musangano uyu wakurukurawo zvakare nyaya yekusabatana kunonzi kwanga koda kuitwa nemasangano aya.
Zvinonzi panga pava nekusadhonzera pamwe chete pakuramwa mabasa, mamwe masangano achinzi anga opomerana mhosva yekushandiswa nemamwe mapoka ezvematongerwo enyika, izvo zvinonzi zvanga zvokonzera zinyekenyeke muvashandi.
Vashandi vehurumende vava nemazuva gumi nemaviri vachiramwa mabasa, vachida kuti mari dzvanotambira dziwedzerwe. Vashandi vanoda kuti mushandi anotambira mari iri pasi ange achitambira mazana matanhatu nemakumi matatu emadhora pamwedzi.
Vari kumirira hurumende muhurukuro dzemihoro, uye vari munyori mubazi revechidiki, VaPrince Mupazviriho, varamba kutaura neStudio7 vachiti semushandi wehurumende, havabvumidzwi kutaura nemasangano enhau.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaTakavafira Zhou, vaudza Studio7 kuti zvimwe zvawiriranwa mumusangano uyu kusarudza vatauriri vanenge vakamirira masangano ose, kwete kuti munhu wese angotaura achiti akamirira vashandi.